Mobile App Push Marketing dị irè
Irè nke Mobile App Push Marketing
Tọzdee, Febụwarị 6, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Dabere na Responsys 'SVP nke Channels Channels Michael Della Penna, site na 2020 aga enwe Ngwaọrụ 75 jikọọ na Internet Ihe. Nke a abụghị ndị mmadụ… ụlọ anyị, ụgbọala anyị, nyiwe anyị, yana ngwaọrụ ahụike anyị niile na -emepụta ngwa ngwa ngwa na ngwa mbadamba kpọbata ọkwa.
Nzaghachi mere na nso nso a nyere nyocha ahịa ahịa mkpanaka nke ndị ahịa 1,200 US wee chọpụta na pasent 68 nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị ebudatara ngwa ndị ebudatara, emeela ka ọkwa ngosi ahụ. N'ime ndị na-eto eto na-eto eto (afọ 18-34), ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 80. Dịka ị ga-ahụ na infographic dị n'okpuru, ntinye bụ ọwa nke ndị ahịa na-ekwesịghị ileghara anya.
Na esemokwu, dị ka email, ga-abụ otu ndị na - ere ahịa nwere ọgụgụ isi si agba ahịa ahịa. Y’oburu na ntughari uzo abaghi ​​uru nke onye oru a, ha gha agbanyu ha. Enwere m mmetụta nke ga-aghọ ebe nkịtị. M n'ezie na-anọdụ ala otu awa na nkwarụ kasị nke ngwa na-eziga push ificationsma Ọkwa m… ha nanị adịghị mkpa iji na-etre maka.
Tags: Michael Della PennaMobile na Mbadamba ụrọahịa efuKwaapush ahịanzaghachi
Socialbungy: Ndị ọgbọ gị na ịre ahịa tebụl
Ọdịnihu nke ekwentị